मौसमविद्को सुझावः जीउ र बीउ जोगाउनुहोस् – SN-One of the news portal in Nepal
२०७६ असार २७, शुक्रबार ०७:१० मा प्रकासित
उनले भने, “भारी वर्षाले पूर्वी, मध्य क्षेत्रको पहाडी भेग र तटीय क्षेत्रमा बढी प्रभाव पार्ने हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । विशेष गरी तराईका पर्सा, चितवन र आसपासका क्षेत्रका आकाश घना बादलले ढाकेको छ । ” उनले पश्चिमका दार्चुला, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुरका क्षेत्रमा पनि लगातार वर्षाको सङ्केत गरे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेका छन् ।
हर्नुहोस आजको मौसम, कहाँ कहाँ वर्षा हुदै छ ?
खेतमा गोरु जोतिरहेको अवस्थामा चट्याङले लागेर मृत्यु
बिहे गरेको ३५ वर्षपछि किन हालिन् हेमाले छवि-शिल्पाविरुद्ध यस्तो मुद्दा?
झापामा ३० लाखको कालोपत्रे ३० दिन पनि टिकेन